Uummata keenya lixaa fi kibbarraa dhumaa jiraniif Qeerroon Oromoo yeroo sagalee ta’aniif. - Kichuu
HomeAfaan OromooVideosUummata keenya lixaa fi kibbarraa dhumaa jiraniif Qeerroon Oromoo yeroo sagalee ta’aniif.
ዛሬ በጪሮ ከተማ ሴት መስሎ ሰልፈኞች ላይ የሽብር ጥቃት ሊፈፅም የነበረው ነፍጠኛ እስከነ ቦንቡ እጅ ከፍንጅ ተይዞዋል
“Oromoo koo deeggarsa kanaan wal qabsiisaatii oromoo Gujii fi wallagaatif sagalee ta’ee falli waarawaan akka kennamuuf sagalee keessan dhageessisaa. Dr Abiyyi Ahimad badhaasa kana kan fudhateef dalagaa dipiloomaasii biyyoota ollaa waliin godheeni amma fuula isaa gara nageenya oromiyaatti akka deebisu gaafachuun dirqama.
“Hiriirri deeggarsaa kun baatiwwan muraasa booda yoo hiriira balaaleffannaatti akka hin deebine barbaaddan MM Abiyyi ahimad Miira habashummaa keessaa bahee akka oromoo ta’ee oromoofis Itiyoophiyaafis waa dalagu har’a dhiibbaa gochuun. Deeggaraa gaafii fi komii ofii itti himachuu. Dhagaa tokkoon simbira lama jechuudha. Kana godhuu keessaniif waa lama argattu:-
1. Oromoon sagalee waliif ta’ee oromiyaa tasgaboofte uumun ni danda’ama. Ummata hamilee cabee komaandipoostin buluuf sagalee taatu hamilee kennituuf aantee argatu.
2.MM dhiiga oromootin aangoo qabatee warra oromoo fixe faarsuf ifaan ifatti daandii siriirra akka hin jirre itti himuun,balaaleffachuun olaantummaa warri habashaa gama MM nurratti fe’aa jiru jalaa bilisa of baaftu.
~from Habtamu Tesfaye Gemechu.